जहाँ कथा छैन, त्यसैलाई उत्कृष्ट कथा एवार्ड रे, कति हाँस्नु ? - अन्तरवार्ता - साप्ताहिक
वर्ष २०७३ मा कुनै सफल नेपालीको नाम खोज्ने हो भने दीपकराज गिरीको नाम पहिलो पंक्तिमा आउँछ । लोकप्रियताको कसीमा उनी ‘नम्बर एक’ कलाकारमै पर्छन् । उनको लगानीमा बनेको चलचित्र छक्का–पञ्जाले वर्षको मात्र होइन, दशककै सफल व्यवसायिक चलचित्रको उपाधि पाइसकेको छ । टेलिश्रृंखला ‘तीतो सत्य’ देखि नै राम्रो कथा–पटकथा र संवाद लेख्ने व्यक्तिका रूपमा पनि उनी सधैं माथि छन् । उनकै संगत पाएर पहिलो पटक ‘छक्का–पञ्जा’ बाट दीपाश्री निरौला सफल कलाकारपछि उत्कृष्ट महिला निर्देशकमा उक्लिएकी छिन् । पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जालमा समेत सक्रिय दीपकराज गिरी यति हुँदाहुँदै पनि खुसी देखिँदैनन् । केही समययता उनले फेसबुकमा नेपाली चलचित्र एवार्डका विषयमा गरेका तीखा टिप्पणीले चर्चा पाइरहेका छन् । नेपाली चलचित्रमा वितरण गरिने एवार्डलाई उनले लगातार उछित्तो काडेको देखेपछि साप्ताहिकले यसपटक दीपकराज गिरीसँग उनकै असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर लामो कुराकानी गरेको थियो ।
सबै एवार्डले नछान्नुको केही कारण त होलानी ?
हरेक एवार्ड पहिलो एवार्डको फोटोकपी भए किन छुट्टा–छुट्टै तामझाम गर्नु ? कार्यक्रम नगरी, कालाकारलाई बोलाएर एवार्ड दिए भैहाल्यो नी । मेरो विचारमा हरेक व्यवस्थापनले एवार्ड वितरणमा फरक नियम बनाएका हुन्छन् । छान्ने तरिका फरक हुन्छ । हलिउड, बलिउड मात्र होइन, विश्वभरि नै चलचित्र एवार्डमा निर्णय गर्ने तरिका फरक–फरक छन् । कुनै एवार्डले कलापक्षलाई ध्यान दिन्छन्, कसैले व्यवसायलाई । कसैले लोकप्रियता र फरक शैलीलाई उठाउँछन् । हाम्रोमा त्यस्तो देखिएन ।
बादी समुदायको कथा टिजरमा